Home - Skills Up
From Passion to Professions of 21st Century
Democratizing quality education.
Skills Up မှာရှိမှာ သင်ယူလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက် ဘယ်လို Course တွေရှိလဲဆိုတာအခုပဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။
မိမိတတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာတစ်ခုကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြင့် Passive Income တစ်ခုကို အခုပဲရှာလိုက်ပါ။
Chinese ဘာသာစကားကို အခြေခံရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပိုမိုချောမွေ့စွာပြောဆို၊ဆက်ဆံလိုသောသူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ Pinyin Course တတ်ပြီးသားသူများပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။
From Passion to Profession of 21st Century isaproduct of cooperation between Hysan International Academic Team and Mr Hans Hasselt,adirector of H2K Transfer from Netherlands with 5-week program outline specifically designed for Myanmar Youth.
Mastering Pronunciation and Getting It Right!
မိမိရဲ့ အသံထွက်ပိုမိုမှန်ကန်လာအောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ ဆိုတာကို Tr.Thiri နဲ့အတူအခုပဲလေ့လာလိုက်ပါ။
Skills Up ကဘယ်လိုသင်ကြားပေးမှာလဲ
မိမိရဲ့အိမ်မှာပဲနေရင်: အားလပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ လေ့လာနိုင်ခြင်း။
ထိရောက်တန်ဖိုးရှိသော နည်းစနစ်များကို အချိန်တိုအတွင်း လေ့လာနိုင်ခြင်း။
Course တစ်ခုစီတိုင်းမှာ သက်မှတ်ထားတဲ့ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ Digital Certificate ကိုထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။
နယ်ပယ်အသီးသီးက Expert များမှ ထိရောက်ပြီးတန်ဖိုးရှိသော နည်းစနစ်များကိုလေ့လာနိုင်ခြင်း။
သင်ခန်းစာများကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း။
စဥ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေသူများအတွက် ဖန်တီးထားသော Community တစ်ခုဖြစ်ခြင်း။
Myanmar students and education during this pandemic
Hysan Education ရဲ့ အခွဲ Skills Up ကို ဘာကြောင့်တည်ထောင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် မိမိနှစ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာဘာသာဖြင့် မိမိအားလပ်တဲ့အချိန်မှာ သင့်တော်တဲ့နှုန်းထားနဲ့ အဓိကသင်ယူနိုင်စေလိုတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကို (workforce capacities) တစ်နေရာတည်းမှာ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
"Learn from the best." ဆိုတဲ့ Skills Up ရဲ့ Motto အတိုင်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ကြိုးစားနေကြတဲ့ Professionals များမှ အကြံကောင်းများ၊ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များ၊ နည်းစနစ်ကောင်းများကို တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတတ်ကြိုးစားချင်သူများအတွက် နည်းစနစ်ကောင်းများကို Skills Up Community မှာလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
© 2021 SkillsUp. All rights reserved.